6 बजेटमा समूह यात्राको योजनाको लागि स्यावी सल्लाहहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >6बजेटमा समूह यात्राको योजनाको लागि स्यावी सल्लाहहरू
यो सहि विश्वास गरिन्छ कि यात्रा एउटा चीज हो जुन तपाईं किन्न वा धनी महसुस गर्न खरीद गर्नुहुन्छ! र यो सँधै आवश्यक छैन कि तपाईंले धनी आनन्द लिनको लागि आफ्नो कडा कमाएको पैसाबाट अलग हुनु पर्छ. सूर्य चुम्बन उष्णकटिबंधीय टापुहरुमा उद्यम गर्ने योजना बनाउँदा, वा हिउँले ढाकिएको स्की ढलानहरू, वा अन्यथा हरियो मरुभूमि, तपाईं निरन्तर असंख्य रिजोलुसनहरू गर्दै हुनुहुन्छ. तपाईको सपना साकार भएको बनाउनुहोस् उही धेरै जटिल नबनाई. तपाईंको समूहसँग बस्नुहोस् र तपाईंको बजेट भित्र योजना गर्नुहोस्. सम्पूर्ण यात्रालाई समझदार बनाउनुहोस्. सामूहिक यात्राहरू एक उत्तम साधन हो. तर सबै सहज रूपमा पाल छैन, यदि पूर्णताको साथ योजना गरिएको छैन भने. यो यात्रा खर्च ट्रयाक राख्न यो तर्कहीन लाग्न सक्छ, तर त्यहाँ धेरै लुकेका ग्लिचहरू छन्. समूह यात्रा र सबै तार्किक योजना सम्बन्धित सबै नकारात्मक विशेषताहरू बेवास्ता गर्नुहोस्. बजेट-अनुकूल समूह यात्रा को योजना बनाउन को लागी जान्ने छ कि छ परेशानी-मुक्त सल्लाह तल पढ्नुहोस्.
1. यात्रा बजेटमा निर्णय लिनुहोस्
हो! तपाईं ठिक हुनुहुन्छ! तपाईंले कुल गन्तव्यको बारेमा जान्नको लागि गन्तव्यको बारेमा निर्णय गर्नुपर्दछ. तर यो कहिलेकाँही मुश्किल हुन्छ, दुबै आपसमा सम्बन्धित छ. र यो पनि एक धेरै जटिल मामला हो. यद्यपि तपाइँ साथीहरूको समूहसँग तपाइँको अर्को यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ, सबैले यसलाई समान रूपमा लिन सक्दैनन्. यसरी, सीमित बजेटको साथ पाउनुहोस्, सर्वसम्मतिले निर्णय गरे. सम्पूर्ण योजना सहज हुनेछ, समूह मा सबै भन्दा धेरै खर्च गर्न दबाब महसुस गर्नुपर्दैन को रूप मा. पनि, गन्तव्य छनौट गर्ने निर्णय निर्णय सजिलो हुन्छ, विशेष गरी दिमागमा निश्चित बजेटको साथ. तदनुसार, तपाईं, अन्य समूहका सदस्यहरूसँग, थप खर्चहरूमा उडान जस्तै कल लिन सक्छ, भाडा, खाना, सैर, र अधिक. पूर्ण सहयोग आवश्यक छ, सामूहिक यात्राको लागि योजना बनाउँदा, एकता कायम गर्न.
लक्जमबर्ग देखि ब्रसेल्स ट्रेन टिकटहरू
एन्ट्वर्प ब्रसेल्स ट्रेन टिकटहरू
एम्स्टर्डम देखि ब्रसेल्स ट्रेन टिकटहरू
पेरिसदेखि ब्रसेल्स ट्रेन टिकटहरू
2. स्प्लिट-अप पूरै खर्च लाक्षणिक रूपमा
कसरी खर्च छुट्याउने पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहोस्. कुल समूहको सदस्यहरू बिच कुल मूल्य छुट्याउने साधन र तरीकाहरूमा निर्णय लिनुहोस्. उदाहरण को रुपमा, के तपाईं सम्पूर्ण होटल कोठा बुकिंगको लागि पूर्ण उत्तरदायी हुनुहुन्छ?, वा तपाइँ आधा मा साझा गरीरहेको हुनुपर्छ? वा, के तपाईं ट्याक्सी भाँडामा लिने र दिनहुँ आउटिंग जस्ता जिम्मेवारी लिन इच्छुक हुनुहुन्छ?? धेरै समूह यात्रामा, विशेष ड्युटीको हिस्सा लिनु सामान्य सराहनीय छ. यसले जटिलताहरूलाई कम गर्दछ र सम्पूर्ण यात्रा-सम्बन्धित खर्चलाई समेटेको छ.
यदि तपाईंले छिटै नै ठूलो बजेट यात्राको लागि योजना बनाउनु भएको छ भने, एक व्यक्तिगत खाता स्थापित गर्न कोशिस गर्नुहोस्. तपाईंले पहिले नै राम्रो गर्नु पर्छ. समूह यात्रामा शामिल सबैले एक विशेष रकम जम्मा गर्न सक्दछन्, मासिक, अन्तिम मिनेट बाधा माथि बचत गर्न. यो राम्रो होटेलहरू समात्नुको चलाखीपूर्ण कार्य हो, हवाई उडानहरू, र उत्कृष्ट खाना.
म्युनिकदेखि ज्यूरिख ट्रेन टिकटहरू
3. आर्थिक उडानहरू र जेब-मैत्री अझै ग्लैमरस गन्तव्यहरूमा विश्वास गर्नुहोस्
एक समूह यात्रा को लागी योजना spree मा, तपाइँको पैसा संग एक सानो सक्रिय हुन. व्यावसायिक वाहकहरूमा फोकस गर्नुहोस्. त्यहाँ धेरै लागत प्रभावी एयरलाइन्सहरू छन्, यात्रा प्याकेजहरूको एक मुट्ठी होस्टिंग. तपाईंको समूह साथीसँग लुकेका सूक्ष्म चीजहरूको बारेमा छलफल गरेर तपाईंको चाल योजना बनाउनुहोस्. उदाहरण को रुपमा, तपाई रोममा यात्रा यात्रा योजना गर्न सक्नुहुन्छ, एथेन्स, र इस्तानबुल माल्ता मार्फत. वा अरू, बाट तपाईंको समूह यात्रा सुरु गर्दै बर्लिन प्राग, बुडापेस्ट र रीगा एक राम्रो विकल्प खडा! र कसरी एक सडक यात्रा को बारे मा वा एक हप्ता लामो शिविर अनुभव तपाईंको साथी साथीहरु संग वाइल्ड्स मा? अधिकांश समय, मौसम अवरोधको रूपमा कार्य गर्दछ. एक मुसलधारे वर्षाको बावजुद, बिजुलीको घाम, वा बतास चलिरहेको छ, एको सहायतामा कारमा यात्रा गर्दै छत र्याक शामियाना, एउटा आशिष् हो! यो पूर्ण कभरेज र स्ट्याक्ड-इन सामानको शेडिंगमा पूरा गर्दछ, जबकि पूरै बनाउने यात्रा अनुभव एक आराम.
एम्स्टर्डम लन्डन ट्रेन टिकटहरु
बर्लिनदेखि लन्डन ट्रेन टिकटहरू
ब्रसेल्स लन्डन ट्रेन टिकटहरु
4. स्मार्ट आदेश जबकि खाद्य अर्डर
एक समूह यात्रा सामान्यतया एक सफल एक हो जब खानासँग सम्बन्धित कुनै बहस वा तर्क हुँदैन, विशेष गरी. हो! प्राय: समूह ट्रिप्स प्रजनन 'अवहेलना जब प्रश्न प्रत्येक सदस्यको खाना प्राथमिकता संग उठ्छ. यस्तो अवस्थामा, सकारात्मक सोच र स्वस्थ खाना तपाईंको आदर्श वाक्य हुनुपर्दछ. रेस्टुराँ चेकमा विभाजन गर्दा समूहका साथीहरू बीच समस्या र भ्रमको ग्यारेन्टी हुन्छ. उदाहरण को रुपमा, दशको समूहमा, एकल व्यक्तिaको सम्पूर्ण बिल भुक्तान गर्दछ रक्सि को बोत्तल, र पछि समूहमा अन्य व्यक्तिहरू अन्तरालमा भुक्तान गर्दछन्, एक महत्वपूर्ण भ्रम हुनेछ. त्यसैले, सधैं चेक विभाजन मा विश्वास गर्नुहोस्. वा अरू, तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ 'साथी-जोडी।' समूहमा केहि अन्य व्यक्तिसँग आफ्नो अंश क्लब गर्नुहोस् र बिल भुक्तान गर्न अगाडि बढ्नुहोस्।.
मिलान बाट रोम ट्रेन टिकट
फ्लोरेन्स रोम रोम टिकटहरु
पिसादेखि रोम ट्रेन टिकटहरू
नेपल्सदेखि रोम ट्रेन टिकटहरू
5. खर्चको साथ राम्रोसँग गणना गर्नुहोस्
टेक्नोलोजिकल रुपमा सुस्त हुन चाहन्छु, र समूह बीच एक स्मार्ट व्यक्ति को रूप मा बाहिर खडा? विभिन्न अनलाइन अनुप्रयोगहरूको मद्दत प्राप्त गर्नुहोस् जुन तपाईंको सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ, खर्च सम्बन्धित. शपथ लिनुहोस् जस्तो अनुप्रयोगहरूमा विभाजित वा गुगल कागजात, किन कि ती दुबै समूहमा उपस्थित सबैलाई पहुँच गर्न अनुमति दिनुहुन्छ, हेर्नुहोस् र सम्पादन गर्नुहोस्, तिनीहरूको आवश्यकता अनुसार. तर तिनीहरूको व्यक्तिगत सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूका बारे सतर्क हुनुहोस्.
तपाईं यी अनुप्रयोगहरूमा समूह सिर्जना गर्नुहुन्छ, जहाँ समूह सदस्यहरूले छिटो लग ईन गर्न सक्दछ र प्रतिशतमा सम्पूर्ण खर्च विभाजन गर्न सक्दछ. चेतावनीहरू बिल सफा गर्ने बारे चिन्तित व्यक्तिलाई मैत्री अनुस्मारकहरू पठाउँदछ. समूह यात्रा खर्च तालिका लागि योजना बनाउँदा, एक ट्याली राख्ने वा मौखिक भुक्तानी मा व्यवस्थित गर्नबाट जोगिनुहोस्. एक शान्तिमय अनुभव गर्न यो याद गर्नुहोस् अगाडि यात्रा.
एम्स्टर्डम पेरिस ट्रेन टिकटहरु
लन्डन देखि पेरिस ट्रेन टिकट
रोटरडम पेरिस ट्रेन टिकटहरु
ब्रसेल्स पेरिस ट्रेन टिकटहरु
6. सबै दायरा तय गर्नुहोस् (यदि कुनै हो भने)
एकचोटि तपाईंले आफ्नो समूह यात्राको रमाईलो गर्नुभयो र खुशीले घर जग्गा, यो तपाइँको पुरानो बिलहरू बसाल्ने समय हो (यदि कुनै हो भने)! कुनै पनि पुराना downणहरू समाधान गर्न राम्रो हुन्छ, समयसीमाको अवधिमा जुन तपाईं सहमत हुनुहुन्छ. अन्यथा, यो सामानको रूपमा खडा छ! धेरैले भुक्तानी गर्न रुचाउँछन् विभिन्न अनलाइन अनुप्रयोगहरू, यो प्रेमी जस्तो लाग्छ. र केहि मुक्तिदाता दिमागमा आएका व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा भुक्तानी गर्न मन पराउँछन्, पैसा मा. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले एक हप्ता वा भित्रमा भुक्तान गर्नुभयो. वा अरू, तपाईं अर्को समूह यात्रा को लागी आमन्त्रित मा हराउन जाँदै हुनुहुन्छ.
पनि हेर्नुहोस्: https://www.saveatrain.com/blog/traveling-europe-budget/
ब्रसेल्स एम्स्टर्डम ट्रेन टिकटहरु
पेरिसदेखि एम्स्टर्डम ट्रेन टिकटहरू
यो कुनै पनि होइन, तर धेरैमा गलत धारणा छ कि असीमित क्रेडिट कार्ड वा नगद प्रवाह बिना विश्वभर यात्रा कहिले पनि सम्भव छैन. वा यदि कसैले सम्पूर्ण यात्रालाई प्रायोजित गर्दछ! तर उस्तै विश्वास नगर्नु राम्रो हो. यो निश्चित छ कि कुनै यात्रा बिना कुनै खर्च बिना लिन्छ. माथि उल्लेखित दिशानिर्देशहरू निश्चित रूपले तपाईं र तपाईंको ग्या-टाई गिरोह सँगसँगै धेरै आगामी यात्राहरूको लागि राख्दछ. तपाईंको निर्णयहरूमा स्पष्ट नेतृत्व लिनुहोस्, र तपाईंको अन्य यात्रा साथीहरूसँग सहयोग गर्नुहोस्, तब समूह यात्रा सपना भन्दा कम हुँदैन!
ट्रेन द्वारा महाद्वीप यात्रा र संग बुक एक ट्रेन सेव!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “6 बजेटमा समूह यात्राको योजनाको लागि स्यावी सल्लाहहरू” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fgroup-trip-on-budget%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
बजेटट्राभल grouptravel GroupTrip travelbytrain traveltips TripOnBudget